एसियाली खेलकुद : नेपाली प्याराग्लाइडिङ टिमले रच्यो इतिहास ! - एसियाली खेलकुद : नेपाली प्याराग्लाइडिङ टिमले रच्यो इतिहास !
एसियाली खेलकुद : नेपाली प्याराग्लाइडिङ टिमले रच्यो इतिहास !
२०७५, १३ भदौ, 11:48:10 AM
काठमाडौं । एसियाली खेलकुदमा नेपालले अहिलेसम्म स्वर्ण पदक जित्न सकेको छैन । नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो, एसियाली खेलकुद । १९५१ मा भएको पहिलो संस्करणदेखि सहभागिता जनाएको नेपालले अहिलेसम्म दुई रजत र २२ कास्यमात्र जितेको छ ।
इण्डोनेसियाको जाकार्तामा जारी १८औं एसियाली खेलकुद नेपाली प्याराग्लाइडिङका लागि गौरवमय इतिहास कोर्ने सुनौलो अवसर थियो । तर, नेपालले दुर्भाग्यवश रजतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पुरुष टिम क्रसकन्ट्री विधामा नेपाल २७ अंकले जापानसँग पछि रहनुपर्यो र दोस्रो स्थानमै सीमित हुनुपर्यो ।
प्याराग्लाइडिङको टिम क्रसकन्ट्रीमा पाँच खेलाडी हुन्छन् । हरेक खेलाडीले १००० पूर्णांकको २५ किलोमिटरको टास्क पूरा गर्नुपर्छ । र, त्यो टास्क पाँच चरणमा हुन्छ ।
पाँच चरणको स्पर्धामा नेपालको चौथो र पाँचौं चरणहरु निक्कै उत्कृष्ट रहे । त्यसैको परिणाम हो एसियाडमा इतिहासकै दोस्रो रजत । चौथो चरणमा नेपालका तीन खेलाडीले टास्क पूरा गर्दा चौथो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा आइपुग्यो । जहाँ इण्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाको प्रदर्शन खस्किएको थियो ।
पाँचौं चरणमा त नेपाली खेलाडीहरुले कमालै गरे । प्रतिकुल मौसमका कारण १२.८ किलोमिटरमा छोट्याइएको टास्क नेपालका पाँचै जना खेलाडीले पूर्णांकका साथ पूरा गरे । तर, जापानका दुई खेलाडी टास्क पूरा गर्नबाट चुके ।
पाँचौं तथा अन्तिम चरणमा नेपालले २७९७ अंक बटुल्यो । अन्तिम चरणमा खस्किएको प्रदर्शन गरेको जापानले २०५७ स्कोरमात्रै गरेको थियो । तर, समग्रमा पाँचै चरणको नतिजामा भने जापानको ११ हजार ३९१ अंक भयो भने नेपालको ११ हजार ३६४ अंक भयो । र, २७ अंकले जापान स्वर्णको हकदार बन्यो ।
जाकार्ता प्रस्थान गर्नुअघि नेपाली टोलीका कप्तान तथा वरिष्ठ पाइलट विमल अधिकारीले भनेका थिए, ‘टिम क्रसकन्ट्रीमा पदक आउँछ ।’ उनले जापान र कोरियाको खेल लामो समयदेखि नियालेका थिए र कम्तीमा कास्य पदक नेपालको हुने भविश्यवाणी गरेका थिए ।
त्यस्तै भयो पनि, तेस्रो चरणको खेल सकिँदासम्म जापान र कोरिया नेपालभन्दा अगाडि नै थिए । नेपालको कास्यको अपेक्षाअनुसारकै प्रदर्शन भएको थियो । तर, अन्तिमका दुई चरणमा नेपालको प्रदर्शन कमालकै भयो र स्वर्णको निकै नजिक रहेर पनि रजतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।
नेपालमा करिब २० वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङलाई खेलकुदको रुपमा विकास गर्ने प्रयास जारी छ । यसबीचमा नेपालले दुई पटक प्याराग्लाइडिङ प्रि–वर्ल्डकप आयोजना गरिसकेको छ भने १८ संस्करणसम्म राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइसकेको छ ।
नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाको नामबाट पोखराको व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङलाई खेलकुदको रुपमा विकास गर्ने प्रयास भयो । त्यही संस्थाले विभिन्न प्रतियोगिताहरु पनि गराउँदै आयो भने नयाँ पाइलट उत्पादन गर्नेदेखि लिएर भएका पाइलटलाई खेलाडीको रुपमा विकास गर्ने काम भयो ।
यसबीचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएको नेपाल प्याराग्लाइडिङ एण्ड ह्याङग्लाइडिङ संघका कारण केही विवाद नभएको होइन । तर, एसियाली खेलकुदमा पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङलाई समावेश गरिएपछि दुवै संघले आआफ्नो स्वार्थबाट पछि हटेर मुलुकका लागि सहकार्य गरे, जसको परिणाम आजै हामीले देख्न पाएका छौँ ।
प्याराग्लाइडिङले एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई पदकविहीन हुनबाट जोगाएको छ । त्यतिमात्र होइन यस खेलले नेपालका खेल पदाधिकारीहरुको पनि ‘नाक’ जोगाएको छ । एसियाडअघि नेपालले अहिलेसम्म हासिल गर्न नसकेको सफलता दिलाउने बाचा गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार बिष्टलाई पनि रक्षात्मक हुनबाट केही हदसम्म जोगाएको छ ।
नेपालले एसियाली खेलकुदमा कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङलगायतका खेलबाट पनि पदकको आशा गरेको थियो । तर, तीमध्ये कुनै पनि खेलबाट नेपालले पदक जित्न सकेन ।
एसियाली खेलकुदको इतिहासमा नेपालको यो दोस्रो रजत पदक हो । यसअघि सन् १९९८ को बैंकक एसियाडमा नेपाली खेलाडी सविता राजभण्डारीले नेपालका लागि रजत दिलाएकी थिइन् ।
राज्यको लगानी शून्य
प्याराग्लाइडिङ नेपालमा २० वर्षदेखि खेलकुदकै रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । तर, यो खेलको विकास र प्रवर्धनका लागि राज्यबाट केही पहल भएको देखिँदैन । नेपालमा खेलाडीले पदक प्राप्त गरेपछि खेल पदाधिकारीहरुले ‘यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु’ भने पनि खेल क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेखनीय पहल गरिएकै छैन भने पनि हुन्छ ।
एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई समावेश गरिनुमात्रै अहिलेसम्म प्याराग्लाइडिङमा राज्यको भूमिका हो । त्यसबाहेक अहिलेसम्म सरकारीस्तरबाट यस खेलको प्रवद्र्धनमा कसैले स्वामित्व लिएको छैन । तर, एसियाली खेलकुदमा पदक आएपछि र आगउँदो फागुनमा नेपालमै हुने भनिएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि यस खेल समावेश गरिएपछि राखेपले यसलाई ध्यान दिन थालेको छ ।
जसअनुसार सुनसरीको धरानमा यसको प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरा धेरै व्यावसायिक रहेको र व्यावसायिक उडान धेरै हुने ठाउँमा अभ्यास गर्न कठिन हुने भएकाले धरानलाई रोजिएको हो ।
पूर्वाधारमात्र होइन, प्याराग्लाइडिङ खेल नै महंगो भएका कारण सामान्य मानिसका लागि यो खेल पहुँचमा पर्दैन । त्यसैले पनि यसलाई खेलको रूपमा पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सकिएको छैन ।
एउटै ग्लाइडर १० लाखभन्दा बढी मूल्यको हुन्छ भने फरक इभेन्टका लागि फरक–फरक ग्लाइडरको आवश्यकता पर्छ ।